Waa maxay Funimate iyo sida ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo | Androidsis
Ignacio Sala | 21/07/2021 22:00 | Codsiyada Android, Tababarada
Fiidiyowyadu waa kala-dambeynta maalinta. TikTok, Instagram iyo hadda YouTube gaagaaban, waxay noqdeen codsiyada ugu isticmaalka badan, badanaa dhalinyarada, in lagu dhajiyo fiidiyowyo gaagaaban, fiidiyowyo ay asal ahaan asal u yihiin, Waxay saameyn weyn ku leeyihiin dhammaan shabakadaha bulshada.
In kasta oo ay run tahay in TikTok iyo Instagram iyo Shorts labaduba ay meesha naga saareen qalab fara badan oo lagu abuuro fiidiyowyo asal ah oo ay weheliso muusig, tirada shaqooyinku aad ayey u yar tahay marka loo eego kuwa kale codsiyada si toos ah loogu abuuray tafatirka fiidiyowyada gaagaaban sida Funimate.
Qodobkaan waxaan diirada ku saari doonaa codsigan gaarka ah, codsi wuxuu na siinayaa tiro badan oo hawlo ah oo aan awoodno noqo boqorrada shabakadaha bulshada hadaan samir, waqti iyo mala awaalba leenahay.
1 Waa maxay Funimate
2 Maxaa Funimate na siisaa
2.4 Waxyeelada maaskaro iyo caqliga macmalka ah
2.5 In ka badan 100 saameyn
2.6 Adeegso muusikada aad ugu jeceshahay
2.7 Ka jar oo isku dar fiidiyowyada
2.8 Bilow oo dhammee animations
2.9 Saameynta qoraalka
3 Sidee Funimate u shaqeysaa
4 Immisa ayey ku kacaysaa Funimate
Waa maxay Funimate
Funimate waa tifaftire fiidiyow oo dhameystiran oo loo heli karo Android in aan ku soo dejisan karno bilaash, oo ay ku jiraan xayeysiisyada iyo wax soo iibsiga barnaamijka, iibsiyada noo ogolaanaya in aan furno dhammaan howlaha laga heli karo barxada marka lagu daro baabi'inta xayeysiiska ay soo bandhigeen barxadda
Iyadoo in ka badan 10 milyan la soo degsaday iyo in ka badan hal milyan oo ra'yi, Funimate waxay leedahay celcelis qiimeyn ah 4,3 xiddigood shantii suuragalba. Codsigan wuxuu na siiyaa tiro badan oo hawlo ah, illaa iyo hadda, lagu samayn karo oo keliya tafatiraha fiidiyaha fiidiyaha ah.
Thanks to codsigan, waan awoodnaa abuur montages yaab leh, isticmaal tiro badan oo kala guur ah, animations, nooleyso qoraalada, isticmaal miirayaal tiro badan si aad u abuurto fiidiyoowyo cajaa'ib leh oo gaar ah. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan bedelno asalka fiidiyowyada iyo sawirada oo aan ku darno istiikarada si aan u sii wanaajino waxyaabaha aan abuurno.
Xaqiiqdii, tani waa mid ka mid ah Codsiyada badankood la isticmaalay si loogu abuuro fiidiyowyo TikTok fudeydkeeda, maadaama aadan u baahnayn inaad khabiir ku ahaato tafatirka maqalka si aad awood ugu yeesho inaad fuliso fikradaheena, si kasta oo ay u muuqdaan kuwa fog.
Mid ka mid ah astaamihi ugu dambeeyay ee lagu soo kordhiyay dhawaanahan barnaamijka waa isku dhejinta bushimaha, oo ku habboon karaokeing heesaha aad jeceshahay. shaqo aad ugu eg tan ay bixiso barnaamijka Wombo.
Maxaa Funimate na siisaa
Sidii aan kor ku soo sheegay, Funimate waxay siineysaa meesha aan ka saareyno howlo badan oo aan naga hari doonin mid ka mid ah tifaftireyaasha fiidiyowga ah ee loo isticmaalo (Uma jeedo Kama-dambaysta Goos gooska ah ama Adobe Premiere, maadaama kuwani ay ku tartamayaan horyaal aad u kala duwan).
Funimate waxay na siisaa maktabaddeeda u gaar ah oo leh tiro badan oo istiikarro ah, waraaqaha waraaqaha lagu dhajiyo iyo kuwa is dul saaran oo na badbaadin doona, mararka qaarkood, shaqada culus ee ah inaan ka hel waxyaabo ku dar ah fiidiyowyadeena iyada oo loo marayo internetka.
Keyframes ayaa lagama maarmaan u ah inay awoodaan inay abuuraan fiidiyoowyo cajaa'ib leh, maaddaama ay na siinayso kala duwanaansho aan waligeen ka heli doonin isticmaalka keliya kala-guurka. Haddii aadan wali isticmaalin, durba waad qaadanaysaa
Si loo siiyo dareen dareere ah abuurkeenna, gaar ahaan markaan ku biirno fiidiyowyo kala duwan, waa lagama maarmaan haddii ama haddii kala-guur. Tirada kala-guurka ee Funimate ay noo diyaarineyso aad ayey u badan tahay dhammaantoodna waxay leeyihiin a taabasho xirfadeed. Eray talo ah: waqtiga yar ee ku-meel-gaadhku sii soconayo, wuu sii fiicnaanayaa mooyee inay qayb aasaasi ah ka tahay fiidiyaha
Waxyeelada maaskaro iyo caqliga macmalka ah
Sirdoonka macmalka ah sidoo kale wuxuu kujiraa Funimate, sirdoon macmal ah oo noo ogolaanaya inaan bedelno asalka fiidiyowyadeena isla markaana, si kadis ah, ugu darno saameynta maaskaro taabasho xirfad leh. Codsiga ma shaqeeyo mucjisooyin markay tahay in laga saaro asalka. In badan oo isku mid ah asalka, dalabku wuu yeelan doonaa aad uga fudud in laga saaro oo lagu beddelo sawir kale.
In ka badan 100 saameyn
Haddii aad jeceshahay saamaynta, oo leh 'Funimate' waxaad leedahay wax ka badan 100 saameyn oo kala duwan oo aad ugu adeegsan karto fiidiyowyadaada. Talo: ha ku xadgudbin saameynta tan iyo haddii kale waxaad awoodi doontaa inaad diiradda saarto iyaga oo aanad diiradda saarin waxyaabaha ku jira.
Adeegso muusikada aad ugu jeceshahay
Waxay kuxirantahay meesha aad rabto inaad sudho uunkaaga, waa inaad tixgelisaa xuquuqda lahaanshaha heesaha aad isticmaali doontid. Iyadoo Funimate waad isticmaali kartaa hees kasta inaad horey ugu soo dejisay qalabkaaga.
Ku saabsan xuquuqda daabacaadda, Sgeesaha ka socda YouTube waa doorashada ugu fiican maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan u isticmaalno heesta laga heli karo barnaamijkan qaab muuqaal ah oo gebi ahaanba bilaash ah oo aan wax dhibaato ah ku qabin barxadda, si aan awood ugu yeelano lacag-bixinta waxyaabaha ku jira mustaqbalka.
Ka jar oo isku dar fiidiyowyada
Fiidiyowgu inuu noqdo mid guuleysta oo soo jiidasho leh, laguma koobi karo kaliya hal diyaarad, ugu fiican ayaa ah inay muujineyso diyaarado kala duwan inay siiso isku xirnaanta fiidiyaha. Dareenkan, Funimate, oo ah codsi wanaagsan oo u qalma milixdeeda, waxay noo ogolaanaysaa inaan jarno, jarno oo aan ku biirno fiidiyowyada iyada oo aan dhibaato jirin iyo qaab aad u fudud.
Bilow oo dhammee animations
Haddii aad rabto inaad abuuristaada siiso taabasho xirfad leh, waa inaad ku dartaa labada madaxba dhammaad. Dareenkan, Funimate wuxuu na siiyaa waxyaabo badan oo animations ah ku dar labadaba bilowga iyo dhamaadka fiidiyowyada aan ku abuureyno arjiga.
Muxuu noqon karaa codaynta fiidiyowga fiidiyowga haddii aysan noo oggolaaneyn inaan ku darno oo qaabeyno qoraalka? Codsigan wuxuu na siiyaa a noocyo kala duwan oo qaabab qoraal ah iyo animations inaan qoraal ku muujino waxaan rabno inaan dhahno ama aan ku dhihi karin ereyo.
Sidee Funimate u shaqeysaa
Hawlgalka Funimate waa mid aad u fudud, kaas oo u oggolaaday inuu noqdo mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee loo abuuro fiidiyowyada TikTok. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa xulashada fiidiyowga ama fiidiyowyada aan dooneyno u midoobaan abuurista abuurkeena.
Kadib waan dooran karnaa haddii aan dooneyno inaan ka saarno asalka fiidiyowga oo aan ku beddelno sawir kale, kudar qoraalka, istiikarada, miirayaasha ama wixii kale oo ka mid ah ikhtiyaarrada habaynta kala duwan ee uu bixiyo arjiga.
Qalooca waxbarashada Codsigan, ma aha mid aad u sarreeya, laakiin waxay qaadataa waqti in la ogaado sida mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka ay na siiso ay u shaqeeyaan.
Immisa ayey ku kacaysaa Funimate
Barnaamijka Funimate ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka si loo furo dhammaan sifooyinka oo looga saaro xayeysiinta.
Isla marka aad furto arjiga markii ugu horeysay, fariin ayaa la soo bandhigayaa taas waxay nagu martiqaadeysaa inaan qandaraas ku qorno rukunka Funimate Pro, rukun ah oo lagu qiimeeyo 3,99 euro asbuucii.
Muhiim maahan in qandaraas lagaliyo inaad adeegsan karto arjiga. Si aan uga boodno farriintaas waa inaan gujinnaa X oo ka muuqda geeska kore ee midig ee daaqaddaas.
Haddii aynaan bixin lacagta rukunka, ma heli doonno mid kasta oo ka mid ah howlaha in ay na siiso, laakiin kuwa la heli karo ayaa in ka badan ku filan si ay u bilaabaan sameynta fiidiyowyada TikTok, Instagram iyo Gaaban inta badan. Haddii aan aragno inaan ka helno dalabka, waxaan tixgelin karnaa suurtagalnimada bixinta rukunka.
Funimate: tifaftiraha fiidiyowga iyo saameynta fiidiyowga
Developer: Hal qayb oo ka mid ah AVCR Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waa maxay Funimate iyo sida ugu badan ee looga faa'iidaysan karo